कोरोना संक्रमित भएका व्यक्तिसँग कति दिन अगाडि सम्म संगै भए (भाइरस सरेको हुन सक्छ)जोखिममा पर्छन् त ? - PT Online News
२७ बैशाख, २०७८ ००:३०
मानिलिउँ, तपाईंको अफिसमा सँगै काम गर्ने साथीलाई कोरोना पोजेटिभ देखियो। तपाईं कुनै न कुनै रूपमा त्यो साथीको सम्पर्कमा आउनुभएको थियो। यस्तो अवस्थामा के तपाईंलाई पनि भाइरस सरेको हुन सक्छ ? कोरोना भएका व्यक्तिसँग कति दिन अगाडि वा कति समयसम्म सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति जोखिममा पर्छन् ? अब मानिलिउँ, तपाईंलाई संक्रमणको शंका लाग्यो वा परीक्षण गराउँदा पोजेटिभ नै देखियो। यस्तो अवस्थामा होम आइसोलेसनमै बस्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
कोरोना महामारी बेला यस्ता प्रश्नमा सर्वसाधारणलाई ठूलो चासो हुन्छ । पोहोर सांसद गगन थापाले फेसबुक संवादका क्रममा यस्तै प्रश्न सरूवारोग विशेषज्ञ डा.अनूप सुवेदीसँग सोधेका थिए। सबभन्दा पहिला संक्रमित व्यक्तिसँग कति दिनअगाडि सम्पर्क भएको व्यक्तिले सतर्क हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरौं। डा. सुवेदीले यसमा दुइटा कुरा औंल्याए।
पहिलो, लक्षण देखिनु भन्दा ४८ घन्टा अगाडिबाट संक्रमण सर्ने डर हुन्छ। भन्नुको मतलब, कसैलाई आज लक्षण देखिएको हो भने उसले आजभन्दा ४८ घन्टा अर्थात् दुई दिन अगाडिदेखि अरूलाई भाइरस सार्न सक्छ।
दोस्रो, कुनै व्यक्तिमा लक्षण देखिएको छैन तर परीक्षण गर्दा पोजेटिभ आयो भने उसले स्वाब झिक्नुभन्दा ४८ घन्टा अर्थात् दुई दिनअघिबाट संक्रमण सार्ने सम्भावना हुन्छ । ’हामी जनस्वास्थ्यमा यिनै दुइटा आधार मानेर काम गर्छौं,’ डा. सुवेदीले भने।
उनले अझ विस्तार लगाए, ’तपाईंले कुनै साथीलाई एक साताअघि भेट्नुभएको थियो। त्यो साथीलाई हिजोदेखि ज्वरो आउन थाल्यो र आज परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखियो भने तपाईं डराउनुपर्दैन। तर, त्यो साथीलाई दुई दिनअघि मात्र भेटेको हो भने अब तपाईं पनि जोखिममा पर्नुभयो। तपाईंलाई पनि सरेको हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईंले आफ्नो पनि परीक्षण गराउनुपर्छ।’
यति हुँदाहुँदै त्यो संक्रमित साथीलाई परैबाट हाइ–हेलो गरेको हो भने डराउनु पर्दैन। तर तपाईंले संक्रमित व्यक्तिसँग ६ फिट दुरीमा रहेर १५ मिनेट बिताउनुभयो भने तपाईं जोखिममा पर्नुभयो। तपाईंले ३ फिटकै दुरीमा बसेर गफ गर्नुभएको छ, तर ५ मिनेट मात्र बिताउनुभएको छ भने तपाईंलाई जोखिम कम हुन्छ।
’अर्को कुरा, तपाईंहरू दुवैले मास्क लगाउनुभएको छ भने जोखिम अझै कम हुन्छ,’ उनले भने। उनको यो कुराबाट के थाहा हुन्छ भने, संक्रमित व्यक्तिसँग कति दिनअगाडि कति समय बिताएको थियो, कति दुरीमा बसेको थियो, मास्क लगाएको थियो कि थिएन, हात मिलाएको थियो कि थिएन लगायत कुराले जोखिम निर्धारण गर्छ।
’यसबाट हामीले व्यक्तिगत दुरी कायम राख्नु र मास्क लगाउनु कति जरूरी छ भन्ने बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ’हामी नेपालीहरूले मास्कको सवालमा खरो व्यवहार देखाउनैपर्छ। आफूले जतिसुकै मान्नुपर्ने मान्छे भए पनि तपाईं कृपया मास्क लगाउनुस् अनि मात्र हामी कुरा गरौं भन्न सक्नुपर्छ। कसैले नाकमुनि मास्क लगाएको छ भने उसलाई राम्ररी लगाउनुस् नभए म तपाईंसँग कुरा गर्दिनँ भन्नुपर्छ।’